Programme PROSPERER » MAHAVELONA NY VOLY LEGIOMA HOY RAMATOA KALO ELEONORE FILOHAN’NY KOPERATIVA FANANTENANA AO AMBALATENINA FOKONTANY VOHILENGO DISTRIKA VAVATENINA MAHAVELONA NY VOLY LEGIOMA HOY RAMATOA KALO ELEONORE FILOHAN’NY KOPERATIVA FANANTENANA AO AMBALATENINA FOKONTANY VOHILENGO DISTRIKA VAVATENINA – Programme PROSPERER
MAHAVELONA NY VOLY LEGIOMA HOY RAMATOA KALO ELEONORE FILOHAN’NY KOPERATIVA FANANTENANA AO AMBALATENINA FOKONTANY VOHILENGO DISTRIKA…
MAHAVELONA NY VOLY LEGIOMA HOY RAMATOA KALO ELEONORE FILOHAN’NY KOPERATIVA FANANTENANA AO AMBALATENINA FOKONTANY VOHILENGO DISTRIKA VAVATENINA
Efa asa fanaon’i Ramatoa Eléonore ny voly legioma isan- karazany toy ny « courgette », « concombre, « Haricot vert », « choux, aubergine, Petsay, Angivy, anana»………… sns. Velaran-tany kely mirefy 1are no niasany tamin’izany ary fomba fambolena nentim-paharazana no nampihariny. Tsy tena asa fampidiram-bola koa izy tamin’izany fa natao ho laoka mba hamenoana ny banga eo amin’ny fiainana andavan’andro vokatry ny tsy fahampiam-bola indrindra fa rehefa tsy mahasahana ny taom-pamokarana manaraka ny vokatra azo amin’ny fambolena hafa.
Ny taona 2014, rehafa tonga taty Analanjirofo ny Fandaharan’Asa Fanoitra, nieritreritra ity Ramatoa ity ka velom-panontaniana hoe « maninona moa raha hatsaraina ity voly anana efa nahazatra ahy ity amin’ny alalan’ny tohana ho entin’ny FANOITRA ?» Raikitra ny fanatonana ny IVO FANOITRA mba hamantarana ny tokony atao. Mbola tany Vavatenina ny ivon-toeran’i IVO FANOITRA MATEZA tamin’izany.
Hita fa vehivavy liam-pivoarana i Ramatoa Eléonore. Ankehitriny, maro ny tohana efa azony toy ny fiofanana fitantanana, toe-tsaina mpandraharaha, Hay varotra, teknika fambolena legioma. Ny tena nanamarika azy dia ity fiofanana teknika ity satria voasokajy ho isan’ny Mpandraharaha mpampiofana voly legioma « MER Formateur » izy taorian’ny fiofanana rehetra nataony. Isan’ny nampivelatra ny sain’i Ramatoa Eléonore ihany koa ny fandehananay niatrika varotra fampirantiana sy fifanakalozana traik’efa tany amin’ny faritra hafa. Manaraka antsakany sy andavany ny torohevitra azony tamin’ireny izy hany ka miroborobo ny seha-pihariana ataony.
Taona 2015, nampitomboiny ho 5ares ny velaran-tany niasan’ ity mpandraharaha madinika ity. Angivy sy « concombre » ihany no karazana legioma novolena. Nahafahany nividy « MOTO HONDA XL» iray mitentina 3 000 000Ar ny vola azony tamin’izany. Niha nahazo hery izy ka tsy nitsahatra nanatsara ny asany.
Taom-piasana 2017, nampitombo toeram-pambolena hatrany i Ramatoa Eléonore ka velaran-tany 01ha no rakotra voly légioma. Mihatsara ny fitaovana entina miasa satria afaka nividy Kibota mitentina 5 000 000 Ar izy nentina namadika bainga. Naka mpikarama an-tselika 06 ihany koa izy nanampy nikarakara ny voly légioma izay nataony.
Vokatry ny fiofanana momba ny toetsaina mpandraharaha azony, nampivelatra ny asa fivelomany amin’ny seha-pihariana hafa toy ny fiompiana trondro sy fiompiana kisoa Ramatoa Eléonore, izy rahateo manana toerana be velarana azo tsinjaraina ho amin’ireo seha-pihariana ireo. Samy nahitam-bokany daholo ireo seha-pihariana ireo hany ka vola mitentina 25 tapitrisa ariary mahery no voarainy tamin’izany ka nahafahany nividy tokotany mitentina 15 tapitrisa ariary ao Vavatenina.
Vokatr’ireo karazana seha-pihariana isan-karazany ireo dia tsy mitsaha-mitombo ny vola miditra ao anatin’ny tokantrano isan-taona ka 29 tapitrisa ariary mahery ny taona 2018 ary 37 tapitrisa ariary ny 2019. Nanapa-kevitra nividy fitotoam-bary mitentina 7 tapitrisa ariary Ramatoa Eléonore mba hanamora ny fiompiana kisoa ataony sady miteraka fidiram-bola ho an’ny tokantranony ihany koa satria mpamboly vary avokoa ny mponina ao Ambalatenina sy ny manodidina. Nohon’ny habetsahan’ny seha-pihariana hiantsorohany dia naka olona 03 mpikarama raikitra izy izay natokana hikarakara ny voly legioma ranofotsiny.
Mazava tsara ny fizarana andraikitra eo amin’izy mivady ka anjaran’Andriamatoa Caliste vadiny no misahana ny fiompiana trondro sy fiompiana kisoa sady mivarotra ny vokatra legioma. Izy rahateo efa manana moto izay manamora ny fivezivezena.
Laharam-pahamehana ho an’izy ireo ny fanamboarana trano simenitra ao amin’ny tokotany novidiny ao Vavatenina ary efa natomboka ny asa ny taona 2019.
Rapports 15 Bulletin d'information 31
Antsirakoraka, Distrika VAVATENINA: Lasa mpamboly katsaka matihanina i BENAHODY Cécilien
Tanora lahy 26 taona i Andriamatoa Cécilien. Nijanona tamin’ny fianarany teo amin’ny kilasy faha-fito izy. Manambady ary manan-janaka iray. Manoloana izany te hioitra amin’ny fiainany izy. Nisafidy ny hanao seha-pihariana katsaka izy. Liana dia liana i Andriamatoa Cécilien raha nahare fa ny fandaharan’Asa FANOITRA dia mitondra tohana amin’ny tanora tsy an’asa sady tsy mianatra mba…
Marosakoa, Région Boeny: quand la filière bambou est promue dans une zone rouge de déforestation
La filière bambou est encore catégorisée parmi les filières émergentes. A l’aube de la troisième décennie de ce XXè siècle, elle est encore méconnue malgré certaines vertus et utilités écologiques, nutritionnelles et entrepreneuriales. Entre autres : Ses racines qui jouent un rôle important contre l’érosion du sol, qui contribuent à l’humidité et à la fertilité…
Aujourd'hui : 34 vues | Cette semaine : 1154 vues | Total : 6446 vues